အမိုက်စား ပုံစံ လေး နဲ့ ကြွေလောက် စရာကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံတွေ တင်ပေး လိုက် တဲ့ နန်းမွေစံ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / အမိုက်စား ပုံစံ လေး နဲ့ ကြွေလောက် စရာကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံတွေ တင်ပေး လိုက် တဲ့ နန်းမွေစံ
အမိုက်စား ပုံစံ လေး နဲ့ ကြွေလောက် စရာကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံတွေ တင်ပေး လိုက် တဲ့ နန်းမွေစံ
မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံ ကတော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်လျက်ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေ ထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေကာ ကြော်ငြာတွေ ကိုလည်း ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေကို ဝတ်ဆင်လေ့ ရှိတဲ့ သူမကတော့ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုရော ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကိုပါ အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို လူမှုကွန် ယက် စာမျက်နှာထက် တင်ပေးလေ့ ရှိတဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှု ကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထ ားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်လေးဆို ရင်လည်း မမှားပါဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးကြောင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှတရားလေး ပေါ်လွင်နေပြီး အမိုက်စား ပိုစ့်လေးတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်။
သူမကတော့ “မွေစံချစ်တဲ့ ကိုကိုတို့ရေ😘😘😘 မွေစံရဲ့ tiktok video တွေ ပုံတွေကို ကြိုက်ကြ ရဲ့လား. . မွေစံကတော့ အခုတလော နာမည်အရမ်းကြီးနေတဲ့ #5BB internet ကိုသုံးထားတာပါနော် . .ချစ်ရတဲ့ Fan” ဆိုပြီး အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ အတူ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသည်း ယားစရာ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေပိုစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံရဲ့ အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ ကြွေလောက် စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ေမာ္ဒယ္လ္နန္းေမြစံ ကေတာ့ လက္ရွိမွာ ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိေနတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ေတြ ထဲမွာ တစ္ေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေနကာ ေၾကာ္ျငာေတြ ကိုလည္း ႐ိုက္ကူးလ်က္ရွိေနသူေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမိုက္စားဖက္ရွင္ေလးေတြကို ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိတဲ့ သူမကေတာ့ မိန္းကေလး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈေရာ ေယာက်ာ္းေလးပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈကိုပါ အခိုင္အမာရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူမကေတာ့ “ေမြစံခ်စ္တဲ့ ကိုကိုတို႔ေရ😘😘😘 ေမြစံရဲ႕ tiktok video ေတြ ပုံေတြကို ႀကိဳက္ၾကရဲ႕လား. . ေမြစံကေတာ့ အခုတေလာ နာမည္အရမ္းႀကီးေနတဲ့ #5BB internet ကိုသုံးထားတာပါေနာ္ . .ခ်စ္ရတဲ့ Fan” ဆိုၿပီး အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔အတူ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ ေရးသားထားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ အသည္းယားစရာ ပုံစံေလးနဲ႔ လွပေနတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြဟာ ပရိသတ္ေတြကို အခ်စ္ေတြပိုေစခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေမာ္ဒယ္လ္နန္းေမြစံရဲ႕ အမိုက္စားပုံစံေလးနဲ႔ ေႂကြေလာက္ စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ၿပီး အဆိုပါပုံရိပ္ေလးေတြကို ေအာက္မွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
Previous post ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရားတွေ နဲ့ အိပ်ယာထက်က အလန်းစား ပုံလေးတွေ ကို ပရိသတ်တွေ အသည်းယားအောင် ချပြလာတဲ့ သွန်းဆက်
Next post ဖော်ချွတ်နေရ တာပဲ ကြိုက်လို့ ဆက်ဆီမော်ဒယ် အလုပ်ကိုပဲ ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ ပြောလာ တဲ့ မရန်ဆိုင်းနူး